Middle shabelle and hiiraan wararka.
August 15, Wafdi ka socda beesha caalamka oo Kismaayo tagay Wafdi uu hogaaminayay wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo. August 16, Beesha caalamka oo war-saxaafadeed kasoo saartay Jubaland Iyadoo ay saddex maalmood oo keliya ay ka dhiman tahay doorashada hoggaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa beesha caalamka ay ugu baaqday siyaasiyiinta gobolka inay mideeyaan dadaalkooda qabashada doorashada. Duqa magaalada London, Sadiq Khan ayaa la kulmay qurba joogta Soomaalida ee ku nool magaalada London isla markaasna waxaa uu ka hadlay doorka bulshada Soomaalida ay ku leeyihiin horumarka dalkaas. Raadi Raadi. Qarax khasaare geystay ayaa waxaa lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroostaas[Read More…]. Arab News, wuxuu soo bandhigay magacyada madaxda ka qayb gashay martiqaadka uu boqorku sameeyay oo ka dhacday qasriga Mina ee magaalada barakaysan ee Maka, waxaanay kala yihiin: 1 Madaxweynaha Yemen Cabd-Rabbu Mansour Hadi Raysalwasaaraha Djibouti Cabdoulkader Kamil Raysalwasaaraha Guinea Dr. Golaha Milatari ee sida kumeel gaarka ah u haya talada Sudan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada Khartoum ku saxiixay heshiis taariikhi ah oo ay awoodda ku qeybsanayaan. August 17, Doorashooyin Iska soo horjeeda oo Kismaayo ka Dhacay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta mar kale loo doortay inuu sii hogaamiyo baarlamaanka, kaddib doorasho maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Back to top. Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta mar kale loo doortay inuu sii hogaamiyo baarlamaanka, kaddib doorasho maanta ka dhacday magaalada Kismaayo.
Wararka maanta oo muuqaal ah BBC News Somali
Guddi loo dhisay maamul u samaynta Hiiraan iyo Sh/ Dhexe BBC News Somali
Wabiga Shabeelle oo Gobolka Hiraan ku fatahmey BBC Somali
Ilo Wareed Wararka Warbaahinta Caalamka
Soomaaliya, 18 August
Wabiga Shabeeelle oo laga cabsi qabo fatahaad uu ka geysto qeybo ka mid ah Sabti, Augusto, 17, (HOL)-Wararka naga soo gaaraya degmada. “Xaaladda Ceel-waaq waa mid aad u kacsan, ciidamada dowladda. After weeks of flood fears in the agricultural Middle Shabelle region, the. Sida lagu helayo wararka xagga talefoonnada ee magaalada qeybo ka mid ah degmada Hawlwadaag, gaar ahaan deegaanka ku dhow.
Falastiiniyiinta iyo jiilalka asal ahaan kasoo jeeda dhulkaasi ayaa saacadihii u dambeeya barta Twitter ku faafinayay sawirrada ayeeyooyinkood, kuwaasoo ay bogaadiyeen awoodda iyo dhiiragelinta ay ka h.
Wafdi uu hogaaminayay wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo.
In ka badan qof ayuu dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada Kabul ee dalka Afghan.
Doorasho goordhaw ka dhacday magaalada Kismaayo, ayey baarlamaanka cusub ee maamulka Jubbaland ku doorteen guddoomiye cusub.
COLD GALVANISING VERSUS HOT DIP GALVANISING Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta mar kale loo doortay inuu sii hogaamiyo baarlamaanka, kaddib doorasho maanta ka dhacday magaalada Kismaayo.
Haweenayda ka tirsan Congress-ka Maraykanka ee Rashiida Dulayb, ayaa ku gacan saydhay ogolaansho Israel u siisay in ay ayeydeed ku booqato daanta galbeed ee la haysto.
Video: Middle shabelle and hiiraan wararka Ciidamo Gadoodsan oo ka tirsan Booliska Hiiraan oo fariin Xasaasi ah u diray Farmaajo
A family in Bondo Sub-county is in agony after their year-old son was killed at[Read More…]. The[Read More…].
Iyadoo ay saddex maalmood oo keliya ay ka dhiman tahay doorashada hoggaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa beesha caalamka ay ugu baaqday siyaasiyiinta gobolka inay mideeyaan dadaalkooda qabashada doorashada.
Macaamil maqaayad cunno ka iibsanayay ayaa toogtay dalab qaadihii maqaayadda ka dib markii laga daahiyay dalabkiisa. Ugu yaraan saddex taageera ayaa ku dhintay, toban kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal gacan-ka-hadal[Read More…].
Kala daawo BBC Somali wararka caalamka kuwa ugu waaweyn oo muuqaal ah.
La wadaag qodobkan Faahfaahin · Email · Facebook · Messenger · Messenger.
Wararka Warbaahinta Caalamka. by il 4 hours agoHiiraan News maanta suuqa Bakaaraha ee Muqdisho ku toogtay afar qof oo mid haween aheyd. near a military base in Lower Shabelle region, southern Somalia, killing one person.
HS: Beesha Biyamaal oo ka mid ah beelaha Direed oo dagaal kula jira . HS: Dood dhax martay Dooxada Shabelle iyo Hiiraan State.
Golaha Milatari ee sida kumeel gaarka ah u haya talada Sudan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa[Read More…].
Ugu yaraan 63 qof ayaa ku dhimatay in ka badan kalana dhaawac ayaa soo gaaray, kaddib marki qaraxyo ismiidaamin ah lagu weeraray xaflad-aroos oo xalay ka dhacday magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.
Duqa magaalada London, Sadiq Khan ayaa la kulmay qurba joogta Soomaalida ee ku nool magaalada London isla markaasna waxaa uu ka hadlay doorka bulshada Soomaalida ay ku leeyihiin horumarka dalkaas. Iyadoo ay saddex maalmood oo keliya ay ka dhiman tahay doorashada hoggaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa beesha caalamka ay ugu baaqday siyaasiyiinta gobolka inay mideeyaan dadaalkooda qabashada doorashada.
Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yari. Garsooreyaasha maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta u fariista kiiska la xiriira kufsigii iyo dilkii[Read More…].
Booliska dalka Norway ayaa warbaahinta kala duwan u ogolaaday in ay sawirro ka qaataan gudaha[Read More…].
Smart baby monitor de withings video Qarax ka dhacay magaalada Kabul ee caasimada Afqanistaan ayaa waxa dhashay khasaaro.
Ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta suuqa Bakaaraha ee Muqdisho ku toogtay afar qof oo mid haween aheyd, oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Qaraxyadan oo loo adeegsaday miinooyin la dhigay wadada dhinaceeda ayaa ka dhacay wadada u baxda xarunta Maamulka degmada Dayniile gaar ahaan meel ku dhow isbitaalka Guutaale.
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qoddobo ay ka jiraan dalka Tanzania oo laga hirgaliyey goob lagu keydiyo xogta ragga xaasaska leh, si loogala socd iyo qodobkii Hal-abuurka iyo Heesaaga oo caawana uu marti ku yahay abwaan Maxamed M.
August 16, Beesha caalamka oo war-saxaafadeed kasoo saartay Jubaland Iyadoo ay saddex maalmood oo keliya ay ka dhiman tahay doorashada hoggaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa beesha caalamka ay ugu baaqday siyaasiyiinta gobolka inay mideeyaan dadaalkooda qabashada doorashada.
Xukuumadda Federaalka ayaa kasoo hor jeedsatay hannaanka loo marayo doorashada Jubbaland.
Hiiraan bbc somali wararka maanta keyword after analyzing the system lists the list in Odayaasha Dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada Hir-Shabelle ka qeyb.
Dagaalka oo ah mid xoogan ayaa waxaa uu saaka ka bilowday deegaano. Middle Shabelle - Topic Popular Videos - Middle Shabelle & Hiran, Somalia . WARARKA SBC TV BOOSASO YUUSUF CABDI SHIRE 10 04 by SBC. 7 hours ago soomaaliya.
Vincent Peone oo isbuucii hore sheegtay in diyaarad kaligiis ay saartay shirkadda diyaaradaha Delta oo[Read More…]. Israel ayaa dalkeeda ka mamnuucday Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib.
Arab News, wuxuu soo bandhigay magacyada madaxda ka qayb gashay martiqaadka uu boqorku sameeyay oo ka dhacday qasriga Mina ee magaalada barakaysan ee Maka, waxaanay kala yihiin: 1 Madaxweynaha Yemen Cabd-Rabbu Mansour Hadi Raysalwasaaraha Djibouti Cabdoulkader Kamil Raysalwasaaraha Guinea Dr.
Hore Xiga. Learning English. At least two government forces were killed and two more injured when al-Shabaab militants attacked a military base in southwest Somalia on Saturday, officials said.
Grabass charlestons wikipedia The region of Jubaland in neighbouring Somalia will tomorrow elect a new president as the Kenya government covertly intensifies its support for incumbent Ahmed Islam Mohammed Madobe, who has ruled the region over the las.
Waxaa goor dhow ka bilaabmaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland[Read More…]. Macaamil maqaayad cunno ka iibsanayay ayaa toogtay dalab qaadihii maqaayadda ka dib markii laga daahiyay dalabkiisa.
Masuuliyiinta Maamulka degmada Dayniile iyo ciidamada halkaas ku sugnaa ayaa la…. Waxaa hadda soo gabagabowday doorashada guddoonka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
2 thoughts on “Middle shabelle and hiiraan wararka”
August 16, Shirka dib-u-heshiisiinta Galmudug oo berri furmaya. Qarax khasaare geystay ayaa waxaa lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroostaas[Read More…].